China Yakakwirira Dziviriro Silicone Rubber Post Yakaomarara Insulator Mugadziri uye Mutengesi | Nhoroondo
Yakakwirira Dziviriro Silicone Rubber Post Composite Insulator
Iyo yakasanganiswa post insulator inoumbwa negirazi fiber epoxy resin yekudhira tsvimbo, silicone rabha amburera siketi uye zvigadzirwa zvegoridhe.
Musanganiswa wevapfuuri insulators vanogona kushandisa mushe mukoridho wakamanikana kuvhura kumanikidza uye kutumira magetsi. Ivo akakodzera kune kwehunyanzvi shanduko yeguta netiweki, inogona kudzora kukwirira kwematanda neshongwe, uye inogona kuchengetedza yakawanda manpower, zviwanikwa zviwanikwa uye zvemari zviwanikwa. Nekuda kwesimba ravo rakakombama, vanogona kudzivirira tsaona dzakabatana-dzakaputsika tsaona dzinowanzoitika mu porcelain crossarm, isingagone kutsiviwa necrossin crossarm.Small saizi, kurema kurema, kuvhunduka kwakasimba uye kusagadzikana kwesimba, hapana yekuchenesa bhuku, kupa Ichi chigadzirwa chinotora chakakosha tsvimbo dhizaini, compact dhizaini, mhando yepamusoro, huremu hwakaenzana giredhi porcelain uye girazi insulator 1/10, kutakura uye kumisikidza zviri nyore kwazvo.
Inokodzera nzvimbo dzakasviba, yakakwira michina tensile mutoro, kureba kwenguva uye compact mitsara. Kusvibisa mheni kumanikidza chiyero cheiyo imwechete girafu porcelain uye girazi insulators yakawedzera ne30% -50% .Stable performance pa -60 ° C - + 200 ° C ambient tembiricha; Yakagamuchirwa isiri-kuputsa-pasi dhizaini, hapana chikonzero chekuyedza zero kukosha mukushanda.Excellent magetsi mashandiro, yakakwira michini simba, yemukati kutakura epoxy girazi dhonza tensile kukotama simba kupfuura zvakajairika simbi, 8 ~ kakapetwa gumi kupfuura akakwirira simba porcelain zvinhu , zvinobudirira kugadzirisa kuvimbika kwekushanda kwakachengeteka.
Yakanaka anti-kusvibiswa kuita, yakanaka anti-kusvibiswa kuita, yakasimba anti-kusvibiswa flashover, ayo mwando kushivirira voltage uye kusvibiswa shiviriro voltage iri 2 ~ 2.5 nguva imwecheteyo kukambaira kure porcelain insulator.And havafanirwe kuchenesa, inogona kuva inorema tsvina kumhanya zvakanaka.
Diki saizi uye kurema kuyerwa (chete 1/6 ~ 1/9 yeiyo porcelain insulator yeiyo imwechete voltage kirasi). Yakareruka muchimiro, nyore kutakura uye kuisa.
Chigadzirwa maficha nezvakanaka
1.Iyo silicon yerabha yekudonhedza booster iri nyore uye compact
2.Perfect hydrophobic performance, yakanaka kuramba kukwegura, kuteedzera uye kukoromoka.
3.High-simba asidhi-nemishonga FRP tsvimbo inosimbisa kuvimbika kweanoumba insulator.
4.Iye arcing corona mhete inogovera musango wemagetsi padhuze neiyo insulator demo kudzivirira vanhu kubva kuva corona
phenomenon uye chengetedza iyo insulator kubva kune inorema kukuvara mukupedzisira inokodzera kuitira kana flashover.
5.Kuguma kukodzera uye FRP tsvimbo kwakabatana nekunze kwekupedzisira-kukodzera crimping michina, inovimbisa iko kweanogadzira kuita kwechigadzirwa.
6.Iyo yakasarudzika magumo yakakodzera yekuisa chisimbiso mamiriro inovandudza chigadzirwa kusimbisa kuvimbika.
7.Iye akaomarara ekuongorora matanho anoona mhando yakakwana yechigadzirwa chega chega.
8.Tinogona kugadzira nekugadzira zvinoenderana nemifananidzo uye zvakadzama zvinodiwa nevatengi.
Zvinorevei kudomwa kweyakaunganidzwa insulator
Tora iyo modhi nhamba yemubatanidzwa insulator kuti utsanangure zvinorehwa nechinongedzo chemubatanidzwa insulator zvinoreva.SFBBW4-110 / 100.
F- yeyakaunganidzwa insulator.
XB ndeyekukakavara insulator, S ndeyemuchinjiko-ruoko, ZS ndeye posvo, P ndeye pini mhando, uye CG ndeyeye yakaoma-mhando rusvingo-kuboora bushing.
W-- inomiririra chimiro chemumburera, W yakapetwa kaviri amburera, mukuwedzera, kana pasina W, inomiririra yakaenzana dhayamura.
4-- Inomiririra dhizaini dhizaini, uchishandisa 1, 2, 3, 4 ...
110-- inomiririra yakatemwa magetsi (kV), uye izvi zvinomiririra yakatemwa magetsi 110kV.
100- inomiririra ratidziro yemuchina mutoro (kN), panguva iyoyo inomiririra ratidziro yemakanika mutoro we100kN.
Zvinozivikanwa kubva pamusoro apa kuti FXBW4-110 / 100 inomiririra iyo miviri-masenduru amburera mhando kuturika composite insulator ye110kV mutsara, uyo insulator inogona kutakura yakatemwa michina mutoro we100kN.
Chigadzirwa zita Chigadzirwa
Wakaumbwa muchinjiko-ruoko Insulator FSW-35/100 35 100 650 450 1015 230 95
WDC252 / 12 220 12 2400 2160 5500 1000 460
Pashure: Yakakwira Voltage Magetsi Composite Strain pini Insulator
Zvadaro: Yakakwira Hunhu Kukakavara Polymer Kumiswa Insulator
High Voltage Electric hwoupenyu Strain pini Insu ...